Man United, Liverpool iyo Bayern Munich oo ku dagaalamaya xiddig ka tirsan kooxda Arsenal – Gool FM
Man United, Liverpool iyo Bayern Munich oo ku dagaalamaya xiddig ka tirsan kooxda Arsenal
Dajiye February 13, 2020
(England) 13 Feb 2020. Kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa waxay tartan xoogan u galeen sida ay ku heli lahaayeen saxiixa xiddiga kooxda kubadda cagta Arsenal ee Bukayo Saka.
18 jirankan ayaa ka soo baxay Akadeemiyada Arsenal, isagoo xilli ciyaareedkan qeyb ka noqday kooxda koowaad ee Gunners, wuxuuna soo jiitay indhaha naadiyada waa weyn.
Wargeyska “Daily Mail” ee wadanka England ayaa tilmaamay in Arsenal ay isku dayeyso in ay ilaashato xiddigeedan da’ayarka ah ee Bukayo Saka, kaasoo heshiiskiisa uu ka harsan yahay muddo sanad iyo bar ah.
Gunners ayaa dooneysa in ay qandaraaska u kordhiso Bukayo Saka si ay u ilaaliso mustaqbalkiisa kooxda isla markaana uu u noqdo muddo aad u fog, halkaas uu ku qaato toddobaadkii kaliya mushaar gaarsiisan ilaa iyo 3000 pounds.
Haddaba Wargeyska “Daily Mail” ayaa wuxuu xaqiijiyay in labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool ay kor kala socdaan xaalada Bukayo Saka, sidoo kale waxaa raacdada qeyb ka ah naadiga reer Germany ee Bayern Munich.
Macalinka kooxda Ajax oo xaqiijiyay in Hakim Ziyech uu ku biirayo Premier League xagaaga soo socda
Valverde oo ka baxay aamusnaanta isla markaana rajeeyay in Real Madrid loo caleemo saari doonaa La Liga